How To Dzidzisai Travel Sezvo A Nomad Through Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > How To Dzidzisai Travel Sezvo A Nomad Through Europe
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 24/07/2020)
Kana uri Solo mufambi uye uchida kurovedza kufamba sezvinoita nomad, ipapo uri panzvimbo chaiyo. Dzidzisai rokufambira ndeimwe yenzira vofamba Europe kana uchida kuona zvose Europe ine kupa. Ngazvive maguta, kana hunoshamisa dzinongoitika nharaunda unogona kunakidzwa nayo zvose nokuda achifamba nechitima.
Chii chimwe, vaifamba nechitima somunhu nomad ane yakawanda nezvimwe zvakanaka. Unokwanisa kuwana zvose nguva yako, uye zvitima kukupa mukana kuzviita zvakanaka uye pasina hassles. Zvingava nonoka neapo, asi hapana kushushikana mupfungwa kwadzinoita ichi okufamba, nepo ndege chinhu zvakasiyana zvachose chinhu. Kana kufamba ndege, pane dzose kunounzwa rakawandisa dzendege uye overzealous kuchengeteka matanho. Chii chimwe, mune zvimwe zviitiko, uchafarirwa. nokwawaienda nokukurumidza kana ukawana chitima!
Nokuti izvi uye zvimwe zvikonzero zvakawanda, achifamba nechitima pamusoro mazwi ako chinhu chakanakisisa chaungaita. Kana uchida kutanga ichi mashiripiti anongofamba ushingi, nyaya ino ichakubatsira nokupa mazano uye mazano pamusoro sei kuita zvakanaka izvozvo.
Zvinhu Main kuti Funga Kana Uchida Dzidzisai Travel somunhu Nomad
Usati watanga Train Travel wako sechinhu Nomad ushingi, unofanira kuva nechido kuzviita, uye unofanira kuva mari.
Kana uchida kuva tarira chitima mufambi, hamuna matambudziko kana kushanda sechinhu Freelancer kana kubva kumba kwenyu. Chero basa kuti iwe unogona kuita tablet rako, unogona kuzviita chero nzvimbo.
Kana iwe kuda kumbozorora kubva pakushanda zvakadaro kuenda kuzororo, uchaita kupedza mari yako nokuchenjera. The chakanaka pane chinetso kubatsira.
Zivai kuti kana kufamba nechitima kuti 30days kana kupfuura kusarudza Interrail pose zvichipfuura. Asi matikiti Single kukupa mukana kuenda mhiri dzakawanda Europe pa kurerukirwa yako, kuiita nomad muhope. Unokwanisa kuenda apo uye kupi uchida, uye ndiyo nzira yakanakisisa kusika rakasiyana anofambira ruzivo.
Pasinei ukasarudza kwenyu chitima kufamba, you can still kunze mari nenzira iyi.
How Kuponesa Mari kana You Train Travel somunhu Nomad
The chakanaka pamusoro ichi mhando kuri kuti iwe unenge nekupedza mari shoma. By ichi, isu kureva kuti kana iwe kurovedza kufamba sezvinoita nomad, uchafarirwa. zvakanakisisa ruzivo kana kugara chipa hostels, kubika yenyu chikafu, uye zvakawanda.
Vanosarudza kwadzinoita ichi okufamba uchaponesa iwe mari.
mari Most akapedza apo Train Travel somunhu Nomad inoenda kukamuri bookings. zvisinei, kana iwe bhuku hostels, unogona kuponesa mari yakawanda sezvo vari zvikuru inokwanisika kupfuura mumahotera uye kupa ruzivo nani uye kupfuura asingakanganwiki. Chii chimwe, kana iwe kufamba woga, unogona bhuku chero vanhu vakawanda mariri mukamuri, rinova yakachipa pashiri Ipfungwa. Uye kuvimba nesu, uchaita kuda ichi nokuti ichi kuchakupa mukana kushamwaridzana nevamwe vafambi dzakafanana.
Pane rimwe divi, kana uchida kusangana veko, unofanira kushandisa Couchsurfing, nekuti ichi nzira uchafarirwa. kugara veko. Plus, vanogona kukuudza zvakawanda pamusoro guta ravo uye akunzwire dzose mafaro panzvimbo unokosha kushanyira.
Chinotevera chinhu unodya kure panguva nemari yako, tsime, kudya. Unogona kuponesa mari zvokudya nokugadzirira zvokudya zvenyu hostel kana Apartments. hostels Most nemafurati kupa dzekubikira paunogona kushandisa mahara. Chii chimwe, ari Hostel Mamwe mukana kuti kutamba nevanhu uye gadzirira vamwe zvokudya kugoverana.
KuCologne Paris Zvitima
Dzidzisai Travel somunhu Nomad Tips
Kana uri Train Travel somunhu Nomad mhando extrovert, kugara hostels chinhu zvauchasangana rumbidza sezvazvakaita vanhu vakaita semi.
Kana uri Train Travel somunhu Nomad mhando munhu anonyara, uchava kuisa zvishoma nesimba kana uchida kutamba nevamwe. The chakanaka ndechokuti mazuva kuti pashure mashomanana, iwe unenge vajaire nayo. pakupedzisira, uchaita kuda nzira unokwanisa kutamba nevamwe apo kuva nomad mufambi.
Haufaniri kushandisa mubhedha Surfing kugara veko; unogona kurishandisa kutamba navo. The Anwendung zvinogona kushandiswa kuisa meetups pamwe veko vanoda kutora vatorwa usiku kubva.
Chenjerera kuti pickpockets! Sezvakaita nedzimwe guta chero munyika, maguta European vane pickpockets nevamwe matsotsi vanoedza kushandisa vashanyi. Unofanira kungwarira, uye unofanira kuverenga pamusoro mbavha ezvinhu nokuti nzvimbo chauri kushanyira. Ndichiita kutsvakurudza paIndaneti vasati vashanyira guta.
Nguva dzose shandisa Apps kuti anogona kuita hwako nomad aifamba upenyu vasununguka. Kuti chamber mari yako, zvizhinji Apps kunogona kuva shamwari yako yepamwoyo.
Yeuka navi chiedza. Kana iwe uchazova chitima parwendo nomad, uchava chinhu nguva nyore chete akatakura chii zvakafanira. Hostels kupa yakawanda zvinokosha Amenities akaita matauro, hairdryers uye zvakadai, saka haufaniri kuuya yenyu. Plus, kunowanzosanganisira vane washing machine uye dryers dzaungashandisa kuti Euro kana maviri, saka haufaniri kutora nguvo zvakawandisa nemi kana. Kana uchida kufamba akawanda zvinhu, war kungava nani sarudzo.
Zvese muzvese, chitima kufamba sezvinoita nomad ndiyo yakanaka uye dzichikunetsa-isina ruzivo. Unogona kushanyira nzvimbo dzakawanda nyore zvose mhiri kunyika akanaka akafanana Furanzi, Jerimani, Itari, uye zvakawanda. Plus, unokwanisa kuona yakanaka mumaruwa uye dzinokatyamadza nharaunda zvisikwa anofanira kupa. Hakuna rimwe sarudzo kufamba achakupa asingakanganwiki uye mafaro zvakadaro ruzivo ane.
Ita Train Travel wakanakisisa somunhu Nomad urongwa pachine uye Buy The Train Tickets Unoda, uye imi muchava kuiswa kutanga ushingi hwako!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-nomad-europe/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Zh-CN kuti / of kana / kuti ru uye mimwe mitauro.
#traveleurope europeantravel europetravel mazano trainjourney Tranride nezvitima traintip chitima mazano Train Travel chitima kufamba Mazano chitima rwendo famba traveltips
Vatariri From kuGenoa To Florence By Train